စပိန်အတွက်သပိတ်ပေါ်မီးရထားအလုပ်သမားများ Go ကို - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလောကဥရောပ34 စပိန်စပိန်အတွက်သပိတ်ပေါ်မီးရထားအလုပ်သမားများ Go ကို
01 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 စပိန်, ဥရောပ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ 0
အရာကြောင့်ဖျက်သိမ်း 700 ရထားဖြင့်သပိတ်ခေါ်ဆိုခမှတိုင်းပြည်အနှံ့လုပ်ငန်းခွင်၏စပိန်အထွေထွေအဖွဲ့ချုပ် (CGT) တွင်ရထားလမ်းလုပ်သားများမှ
ယင်းသမဂ္ဂများနှင့်အတူထိတွေ့ကနေရလဒ်တွေကိုလက်ခံရရှိအခါစပိန်မီးရထားလမ်း (RENFE) နှင့်အလုပ်သမားသမဂ္ဂ (CGT) ၏အထွေထွေအဖွဲ့ချုပ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအထွေထွေအဖွဲ့ချုပ် (CGT) ထိုသို့သောအပ်နှံမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများမရှိခြင်းအဖြစ်တ္ထုများ၏အနိမ့်အလေးသာ, ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုလားရှိသည်။
12.00 16.00 ၏နာရီအကြားယူသပိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်းရှိကုန်တင်, ခရီးသည်များနှင့်အတူအလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့် 20.00 24.00, ခရီးသည်ရထားနှင့် 700 ၏အမြန်နှုန်း၏ဖျက်သိမ်းခြင်းကြေညာခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသည်, ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး, ခရီးသည်ရထားနှင့် 700 အဆိုပါသပိတ်ကာလအတွင်းဖျက်သိမ်းပြီသတင်းပို့အမြန်နှုန်းထွက်ခွာနေချိန်တွင်အလုပ်သမားသမဂ္ဂအထွေထွေအဖွဲ့ချုပ် (CGT) အလုပျသမား။
အထူးသဖြင့်ခက်ခဲအခြေအနေများတွင်အားလပ်ရက်ကာလမှသက်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်သားတွေရဲ့သပိတ်, မက်ဒရစ်နှင့်ဘာစီလိုနာကဲ့သို့ကြီးမားမြို့ကြီးတွေမှာခရီးသွားနိုင်ငံသားများထွက်ခွာခဲ့သည်။ RENFE, လက်မှတ်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပြန်အမ်းနောက်ထပ်စွဲချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာသူခရီးသည်မှနိမ့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုအာမခံချက်နှုန်းအတွက် 50 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအထွေထွေအဖွဲ့ချုပ် (CGT) 14 နှင့် 30 1 စက်တင်ဘာလနှင့်အတူသြဂုတ်လအတွင်းကသပိတ်ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
မီးရထားအလုပ်သမားများကစပိန်အတွက်သပိတ်ပေါ်သွားပါ 05 / 09 / 2015 သပိတ်, r goin အပေါ်စပိန်ရထားလမ်းအလုပ်သမားများကို: စပိန် Semaf, နှင့် CGT ရထားလမ်းအလုပ်သမား CCOO ပြည်ထောင်စုဖြင့်သင့်ကိုခေါ်သပိတ်ပေါ်သွား၏။ ခရီးသည်ရထားထဲမှာတစ်နာရီကြာသန်းခေါင်မှာစတင်သပိတ်မှောက်ခြင်းနှင့်ကုန်တင်ရထား၏အရှင် 23 20 ရာခိုင်နှုန်း, 75 ရာခိုင်နှုန်း, အချင်းချင်းမြို့အစာရှောင်ရထားလည်း xnumx'lik ဝန်ဆောင်မှုများ၏အာမခံနိမ့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အစာရှောင်ရာမီးရထားဝန်ဆောင်မှုကနေ 72 353 ၏အရာရှိများ, သာမန်အချိန် 255 527 ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မီးရထားဘူတာရုံ၏နံနက်ယံ၌သပိတ်အလွန်လေးနက်သောပြဿနာများမခံစားခဲ့ဘူးသောကြောင့်သတင်းများအရပုံမှန်လမ်းထဲမှာနိမ့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးထားခဲ့သည်။ ယခုနှစ် 343 ပုန်ထမ်းအားလုံးကိုအသစ်ကကန်ထရိုက်များရောင်းချမှု၏အဆုံးအထိကုန်တင်ရထားစစ်ဆင်ရေး၏ပုဂ္ဂလိကပိုင် ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 14 1908 Anatolia နှင့် Orient မီးရထားအလုပ်သမားများကသပိတ်ပေါ်သွား၏ ... 14 / 09 / 2012 14 စက်တင်ဘာလ 1908 Anatolia နှင့် Orient မီးရထားအလုပ်သမားများကသပိတ်ပေါ်သွား၏။ အလုပ်သမားများနာရီ 10,5 8,5 နာရီလျှော့နာရီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ လစာအလုပျသမားအချိန်ကုမ္ပဏီ 20 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလစာဆုကြေးငွေရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 14 1908 Anatolia နှင့် Orient မီးရထားအလုပ်သမားများကသပိတ်ပေါ်သွား၏။ 14 / 09 / 2015 ယနေ့တွင် 14 စက်တင်ဘာလ 1908 Anatolia နှင့် Orient မီးရထားအလုပ်သမားများကသမိုင်းအတွက်သပိတ်ပေါ်သွား၏။ အလုပ်သမားများနာရီ 10,5 8,5 နာရီလျှော့နာရီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်။ လစာအလုပျသမားအချိန်ကုမ္ပဏီ 20 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလစာဆုကြေးငွေရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။
ဘယ်လဂျီယံရထားလမ်းလုပ်သားများသပိတ်ပေါ်သွား၏ 27 / 11 / 2013 ဘယ်လဂျီယံရထားလမ်းလုပ်သားများသပိတ်ပေါ်သို့ သွား. ခဏတစ်များအတွက်ကြားကာလဘယ်လ်ဂျီယံမီးရထားကုမ္ပဏီ (SNCB) မှာဆက်လက်အသစ်တစ်ခုန်ထမ်းထပ်သပိတ်မှဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ မီးရထားအလုပ်သမားသပိတ်ကိုပိုမိုယခုအပတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ဘယ်လဂျီယံရထားလမ်းလုပ်သားများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြည်နယ် Enterprises ဝန်ကြီး Jean-Pascal LABill သတင်းအချက်အလက်များအတည်ပြုများ၏အလုပ်သမားရဲ့စာချုပ်အနီး 2018 အတွက် 1000 အတွင်းတည်ရှိပြီးအဆိုပါမီးရထားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး Package ကိုသူတို့သစ်ကိုအရေးယူအထုပ်အကောင်အထည်ဖော်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပေါ်မှာ fez eto ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်လဂျီယံမီးရထားကုမ္ပဏီ sncb'n ပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မျက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွေ့အကြုံရှိလုပ်သားများအကြားထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်အချက်ပြလာတယ်။ ပြည်ထောင်စု, မီးရထားမှတဆင့်မီးရထားဝန်ထမ်း ...
မီးရထားအလုပ်သမားများကပြင်သစ်အတွက်သပိတ်ပေါ်သွား၏ 13 / 12 / 2013 မီးရထားအလုပ်သမားများကပြင်သစ်အတွက်သပိတ်ပေါ်သို့ သွား. နိုင်ငံအတွင်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ပိုင်းသေသည့်သပိတ်၏။ အမျိုးသားရထားအုပ်ချုပ်ရေးကြောင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းလုပ်သားများဖို့စီစဉ်အချိန်အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဆန္ဒပြ 40 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်ဒဏ်ခတ်စေရန်လိုသည်။ နောက်တဖန်ပဲရစ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရထားထဲမှာအလုပျသမားမြား၏ဒဏ်ခတ်ကမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ခက်ခဲအချိန်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသည်ရထားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စွမ်းရည်၏ 50 ရာခိုင်နှုန်း, အထူးသဖြင့်ရှည်လျားနှောင့်နှေးနံနက်အချိန်၌အသွားအပြန်နာရီမြို့တော်အသက်ရှင်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ချိတ်ဆက်ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံရထားဝန်ဆောင်မှုမနှောင့်အယှက်ရှိစဉ်အခါ, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အီတလီချိတ်ဆက်ရထားအချိန် 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါသပိတ်သောကြာနေ့နံနက်အပေါ်အဆုံးသတ်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ ...
မီးရထားအလုပ်သမားများကပြင်သစ်အတွက်သပိတ်ပေါ်သွား၏ 12 / 06 / 2014 ရထားလမ်းလုပ်သားများပြင်သစ်တွင်သပိတ်ပေါ်သို့ သွား. : ပြင်သစ်အတွက်အမျိုးသားရေးမီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်သားများ၏သပိတ်, တိုင်းပြည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအောက်ပိုင်းသေခဲ့သည်။ အလုပျသမားဒဏ်ခတ်သောလေးသမဂ္ဂများအဖွဲ့ဝင်များဖွငျ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, မနက်ဖြန်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသပိတ်, ရထားလမ်း မှလွဲ. In-တိုင်းပြည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များလည်းပြတ်တောက်ပြည်ပမှာလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကာလ၏အချို့သောသွေဖည်ဖို့ပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, နယ်သာလန်နှင့်စပိန်အတွက်သပိတ်အားဖြင့်မထိခိုက်အင်္ဂလန်နှင့်ဂျာမနီကနေဖန်ဆင်းတော်ရထားဖျက်သိမ်းခံရဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပဲရစ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရထားထဲမှာန်ထမ်းများ၏သိသိသာသာမြို့တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှောင့်အယှက်, အ walkout ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် tools များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သွားမြို့ပြလိုဆင်ခြေဖုံးရထားပေါ်တွင်သပိတ်၏, အမြီးရှည်လျား beltway ကီလိုမီတာအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အစိုးရ ...
စပိန်မီးရထားအလုပ်သမားများအတွက်သပိတ်စတင် 17 / 09 / 2012 ရထားလမ်းကဏ္ဍ၏ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂများအစိုးရရဲ့ခြိုးခြံခြွေမူဝါဒများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်,324 နာရီသြဂုတ်လအပြီးဒုတိယအကြိမ်သပိတ်ပေါ်သွား၏။ အစာရှောင်ခြင်းရထားအပါအဝင်စုစုပေါင်းရထားလမ်းလုပ်သားတွေရဲ့သပိတ်, 261, 350 ထက်ပိုမိုထိခိုက်ပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်ပါပြီ။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းရာခိုင်နှုန်းကို 73 သောနိမ့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးထားသူကပြောပါတယ်။ ရည်မှန်းသမဂ္ဂများ, ဒီအစီအစဉ်နှင့်အတူရထားလမ်းအလုပ်သမားများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထုတ်ပယ်ခံထိုက်ပေ၏အသက်ရှင်နေထိုင်မယ်လို့နှင့်ထောက်ခံသူန်ဆောင်မှုအတွက်ပိုမိုဆိုးဝါးလာစေပါလိမ့်မယ်နေစဉ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့သို့ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်လာရန်မျှော်မှန်းသည့်နေ့ရက်မှ 31 အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအစိုးရကယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်မီးရထားခရီးစဉ်များ၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်, အောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းများ, အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့် 2013 ဇူလိုင်လ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မက်ဒရစ်နှင့် Catalonia ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ...
ပြင်သစ်တွင်သပိတ်ပေါ်မယ့်မီးရထားအလုပ်သမားများ 13 / 06 / 2013 ပြင်သစ်တွင်အလုပ်သမားများမီးရထားအလုပ်သမားများသပိတ် Going, တိုင်းပြည်အတွင်းဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ, ကွဲပြားခြားနားသောရထားလမ်းစီမံကိန်းပေါင်းစည်းကုမ္ပဏီများသည်ဆန့်ကျင်။ အထူးသဖြင့်ကသပိတ်ကြောင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ high-speed ကိုရထားပို့ဆောင်ရေး၏သွက်ချာပါဒမှခန့်မှန်းထားသည်။ အမျိုးသားမီးရထားကုမ္ပဏီ, အစာရှောင်ရထားသပိတ်အစေခံပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 104၏မနက်ဖြန်သာကြေညာခဲ့သည်။ သောကြောင့်ပြင်သစ်အတွက်သပိတ်၏, အီတလီနှင့်ဆွစ်ဇာလန်ထက်ဝက်အကြားလေကြောင်းခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းပါလိမ့်မည်။ ပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ကျင်းပမည့်အဆိုပါသပိတ်, အစာရှောင်ခြင်းရထားကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မထားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သပိတ်၏, ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့အကြားညဥ့်ရထားကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။
Greve De မီးရထားအလုပ်သမားများပြင်သစ်တွင်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 01 / 06 / 2016 Greve De မီးရထားအလုပ်သမားများပြင်သစ်တွင်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်: ပြင်သစ်အတွက်အလုပ်သမားဥပဒပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်းတက်ရောက်ခြင်းအထွေထွေသပိတ်ပျံ့နှံ့ယနေ့ကနေရထားလမ်းလုပ်သားများနှင့်တိုင်းပြည်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်သစ်တွင်, အလုပ်သမားဥပဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လည်းတက်ရောက်ခြင်းရထားလမ်းလုပ်သားတွေရဲ့အထွေထွေသပိတ်ပျံ့နှံ့ယနေ့မှသည်တိုင်းပြည်ဆန္ဒပြရန်စနစ်တကျ။ သူကမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းအများပြည်သူရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးပိုနှစ်သက်မယ်လို့စက်ရုံလုပ်သားများအားဖြင့်သပိတ်ပေါ်သွားကြဖို့တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်စာဆီရှားပါးမှုကြောင့်။ သူလုပ်ချင်အစိုးရရဲ့အလုပ်အကိုင်အဥပဒအပြောင်းအလဲများကိုဆန့်ကျင်စတင်သပိတ်မှောက်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်မတိုင်မီပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ မီးရထားအလုပျသမားမြား၏ပူးပေါင်းအတွက်တိုင်းပြည်အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအောက်ပိုင်းသေ။ အဆိုပါရထားလျှော့ချခဲ့ကြသည်အချိန်တစ်ဦးကအများကြီး။ ပြင်သစ်လေကြောင်းလေယာဉ်မှူး ...
ပြင်သစ်မီးရထားအလုပ်သမားများ '' Strike 36 နေ့ပြင်ဆင် 02 / 04 / 2018 ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင် SNCF အမျိုးသားရေးရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအေဂျင်စီန်ထမ်း3တစ်လကြာ walkout တနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့တွင်အာဏာပိုင်အရာရှိများ, ဧပြီလ3သူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်အလေးအနက်အသွားအလာအင်ဂျင်နီယာများ၏သပိတ် xnumx ရဲ့% ပြင်သစ်နိုင်ငံသားများသတိပေးခဲ့သည် join ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ "မီးရထားအခက်အခဲအကျပ်အတည်းများက" ကော်ပိုရေးရှင်းန်ထမ်းများ၏နယ်ပယ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှုစုစုပေါင်း 773လအတွင်းထွက်ခွာလာမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့အဘို့ action ကိုတင်ထားရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel macron ရထားလမ်းစိတ်ကြိုက် SNCF န်ထမ်းဥပဒေကြမ်းများအတွက်လမ်းခင်းရန်တုံ့ပြန်။ macron, မီးရထားဝန်ထမ်း၏အထူးအဆင့်အတန်းအပေါ်ပညတ္တိကျမ်းကိုပြောင်းလဲရန်လိုသည်။ တစ်ဦးကအလွန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တစ်ခုအစောပိုင်းညဥ့်နှင့်တနင်္ဂနွေဆိုင်းနှင့်အတူရထားလမ်းလုပ်သားများ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 14 1908 Anatolia နှင့် Orient မီးရထားအလုပ်သမားများကသပိတ်ပေါ်သွား၏ ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: စက်တင်ဘာလ 14 1908 Anatolia နှင့် Orient မီးရထားအလုပ်သမားများကသပိတ်ပေါ်သွား၏။
Greve De မီးရထားအလုပ်သမားများပြင်သစ်တွင်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ပြင်သစ်မီးရထားအလုပ်သမားများ '' Strike 36 နေ့ပြင်ဆင်